Kuzorora Kwemhuri kuDisney Inoona Vanga Vachinyengwa neChishandiso chekutevera
musha	Horror Varaidzo Nhau	Kuzorora Kwemhuri kuDisney Inoona Vanga Vachinyengwa neChishandiso chekutevera
Nguva Yese, Mumwe Munhu Akanga Achiona
by Trey Hilburn III Dai 2, 2022
by Trey Hilburn III Dai 2, 2022 15,114 maonero
Imwe mhuri yakakwanisa kupedza zuva rakanaka paDisney yakaita kuti bejeezus vatye kubva pavari apo rwendo rwacho rwakanga rwapera. Mhuri yaGaston yaive nenguva yakanaka panguva yepaki yakaona kuti isingazivikanwe Apple Airtag tracker yaive ichienderana nenzvimbo yavo nguva yese.
Spooky right? Chaityisa chose tichifunga kuti mudziyo wacho waisava wavo. Panguva yekufamba kwavo pa monorail, vakagamuchira meseji kuburikidza ne iPhone yavo kuti paive neAirtag yaivatevera.
Iyo Apple Airtag ichangobva kuwana kwakawanda kukurumbira pamhepo kuburikidza neTik Tok. Zvinosuruvarisa kuti yave tsika inotyisa iyo ex kana stalkers chaimo varikudyara michina iyi (iyo inenge saizi yekota) pane vasingafungire.
Mhuri iyi pavakangodzokera kumotokari yavo, vakafunga kupota vachiongorora zvinhu zvavo ipapo ipapo kuti vawane mudziyo wacho. Nezvose zvakatariswa - vakazokanda mapfumo pasi ndokutanga kutyaira vachienda. Pavakazotarisa zvakare kuti vaone nzvimbo yekupedzisira yaizivikanwa yekutevera, yakange yakanyorwa senzvimbo yavo yekupaka. Chakazongoonekwa nemhuri yekwaGatson ndechekuti tracker yainge yadonha nezvinhu zvavo pavaitsvaga muparking.
Izvi zvinoreva kuti pane imwe nguva stalker akadyara iyo Airtag akange apinda mune yavo yega uye aive nenguva yekunyatsodyara mudziyo.
Airtag inobvumira chero munhu kudyara chinhu pamotokari yakamira uye wobva waona kwawanga uri uye kunyangwe kwawakamira kwenguva yakatarwa.
Pane mavhidhiyo kunze ikozvino ekuti ungaita sei shuwa kuti hausi kuteverwa. Sezviri pachena ichave yakajairika ruzivo ruzivo rwatinofanira kuve takashongedzerwa narwo kuitira kumisa creepers kupedza mazuva avo nehusiku vachikunyangira kubva mumimvuri.
Tarisa vhidhiyo iri pazasi yeimwe chiitiko umo mumwe munhu akapedzisira achiteverwa kuburikidza neAirtag mudziyo.